Resaky ny mpitsimpona akotry : madio tsy mangarahara | NewsMada
“Raharaha volamena 73, 5 kg”: nampidirina eny Tsiafahy ilay mpiasan’ny ladoany
Manifestation politique: l’opposition va droit dans le mur
Habibiana nahatsiravina : Sivy mianaka may nodoran’ny dahalo
Offenses faites aux enfants du président: Mialy Rajoelina répond à Fanirisoa Ernaivo
Resaky ny mpitsimpona akotry : madio tsy mangarahara
Par Les Nouvelles sur 21/11/2017
Isak’izay manao fanolorana ny valin’ny ezaka fanajariana na fanampiana noho ny voina nihatra tamin’ny mponina ny tompom-pahefana iray ao amin’ny fitondrana, dia toa lasa miitatra ny resaka amin’ny fametrahana fanontaniana hoe vola avy aiza indray no nahodikodina isehosehoana anaovana fanomezana.
Fanendrikendrehana tsy mitombona anefa izany. Ao anatin’ny lalàna momba ny tetibolam-pajankana dia misy andiany maromaro any antsefatsefany any mametra sorabola izay ahafahan’ny Filoha sy ny Praiministra ary ireo manam-pahefana ambony andoarana ampahany izay ataony tolotra. Noho izany tsy misy ny fanodikodinana, fa ara-dalàna ny fanampiana atolony rehefa mitsidika faritra izy ireny. Matetika amin’ny fitokana zava-bita, indraindray noho ny firaisan-kina amin’ny mponina niaram-boina.
Ny hany afaka kianina angamba dia ny tsy fahampian’ny mangarahara eo am-panolorana ilay vola atao ho famporosihana na entina ho fanampiana. Na ny fihetsiky ny mpanolotra na ny fientanan’ny mpandray an’ilay tolotra dia toy ny hoe tao anatin’ny fananan’ilay mpanolotra no nanovozany ilay fanomezana entiny fa tsy volam-panjakana na vola notovozana ara-dalàna.
Ny fanapahan-kevitra amin’ny fanokanana izany ampaham-bola atao tolotra izany, noho ity antony ity na noho ny tranga hafa, no miankina amin’ilay mpanolotra. Tsy dia falalahan-tànana na lemim-panahy no tena fototra fa miankina amin’ny fahendren’ny tompo-pahefana ny fitrangan’ireny hetsika ireny. Fahendrena no resaka. Indro kely anefa hoy ny mpandrafitra. Inona no manakana ny tsy fanasongadinana an’izay fahefana mitantana am-pahendrena izay, fa ilaozana misehoseho amin’ny fijejoana toy ny hoe noho ny lemim-panahy no nisintonana vola avy any anatin’ny paosin’ny tena, ka mahatonga ny maro lasa saina ka manontany hoe: fa dia manana toy iza ary ity Rangahy ity, ary avy aiza tampoka teo ny fananany ahafahany miseho ho malala-tànana toy izao ?
Misy angamba ami’ireny manam-pahefana ireny no mihevitra ho voninahitra izany hoe “miliaridera” izany, na tsy mazava aza ny fipoipoiran’ilay vola mitobaka. Ny maro kosa anefa dia mahita rariny amin’ny fametrahana fanontaniana ary rahefa tsy mahazo valiny dia lasa mino an’izao honohono sy fanendrikendrehana rehetra izao.
Faran’ny herinandro: hiaka-tsehatra i Psykopasy 27/02/2021
« Soirée Mafana 2 ème Ed. » : Mpanakanto 20 hiaka-tsehatra 27/02/2021
Andraikitra eo anivon’ny FJKM: hiatrika ny taon-jobily faha-30 ny Pdt Rivo 27/02/2021
Tetikasa Afafi-Nord : fanarenana fitarihan-drano any Ambilobe 27/02/2021
Orinasa Ambatovy : efa miverina miasa ny mpiasa 27/02/2021